Generator ကိုစောင့်ကြည့် - ရှန်ကျန်းပူးတွဲနည်းပညာ Co. , Ltd မှ
smart Lock က
အေး Chain စောင့်ကြည့်
စမတ် Trailer စောင့်ကြည့်
7:00 pm တွင်ရန် 9:00 pm တွင်ထံမှ7နေ့ရက်များတစ်ပါတ်
base မီးစက်စစ်ဆင်ရေးစနစ်နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးသောဘက်ပေါင်းစုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကြောင့်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံခန့်ခွဲမှု, စစ်ဆင်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှု, နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု, အဓိကပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ဆက်စပ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြေခံ, မီးစက်ကိုမှန်ကန်အချိန်အခြေအနေနှင့်နှိုးဆော်သံစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့တူ features တွေပါဝင်သည် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု, etc
ရီးရဲလ်အချိန်အခြေစိုက်စခန်းစစ်ဆင်ရေးအခြေအနေနှင့်နှိုးစက်စောင့်ကြည့်ရေး, အဓိကထိန်းချုပ်ပြားကိုထောကျပံ့, အထိ 37 status ကိုနဲ့ 18 နှိုးစက်စောင့်ကြည့်ရေးကိုထောကျပံ့
ကို Maintenance နှင့်ဗိုလ်မှူးပြုပြင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ကို Maintenance နှင့် Entry: အပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးဆုံးသောအခါ, သတင်းအချက်အလက်မိုဘိုင်းကနေတဆင့် ဝင်. စင်တာဖို့ဖမ်းမိဓါတ်ပုံတွေကို upload လုပ်, ဒါမှမဟုတ်ရုံးပြန်ရလာသောအခါကို PC မှသတ်မှတ်ထားသောလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ထဲသို့ဝင်နိုင်ပါသည်နိုင်ပါသည်
နှိုးစက်စီမံခန့်ခွဲမှုသညျနှိုးဆော်သံဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအမှုအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များ prompt ကိုယူနိုငျသညျ, ထိုနှိုးဆော်သံကိုချက်ချင်း, သူတို့ကိုခြေရင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်, မီးစက်အခြေအနေ, ဖြစ်နိုင်သမျှပျက်ယွင်းနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းကြားရန်, ဒါရိုက်တာ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်နည်းပညာရှင်ထံမှကြိုတင်မိုဘိုင်းထံသို့စေလွှတ်ပါလိမ့်မည် နှင့်ညာဘက်အရေးယူ။
ယောဘသည် Entry: အပလွံပြုပြင်ပြီးနောက်, ပြင်၏အခြေအနေများမိုဘိုင်း app ကနေဝင်ကြ၏ခံရနိုင်ပြီး, ဖမ်းယူထားသည့်ဓါတ်ပုံများနှင့်အတူ upload; လာသောအခါနောက်ကျောရုံးသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများတွင်သတ်မှတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားဖြင့်ဝင်ကြ၏။
စွန်ပလွံပြုပြင်ခြင်းအစီရင်ခံစာ: အားလုံးအလုအယက်ပြုပြင်သမိုင်းအစီရင်ခံစာတစ်ပတ်ကို, တစ်နေ့လျှင်အဖြစ် check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်လလျှင်, အစီရင်ခံစာ client များအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ပါသည်။
set ကိုအချိန်ထက် ကျော်လွန်. ပြုပြင်ခြင်းများအတွက်ပြသအနီရောင်ဇာတ်ကောင်ရှိရလိမ့်မည်။
နေ့စွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဆိုပါစနစ်အားအကြိမ်ရေပြုပြင်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစားထိုးသုံးစွဲအချိန်ကိုလည်းပါဝင်သည်, လစဉ်လတိုင်းအတွက်ဘူတာရုံတည်နေရာအလုအယက်ပြုပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မီးစက်နှစ်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်, etc